वैज्ञानिकले पत्ता लगाए क्यान्सर उपचारको नयाँ तरिका | Ratopati
वैज्ञानिकले पत्ता लगाए क्यान्सर उपचारको नयाँ तरिका
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeपुस १२, २०७५ chat_bubble_outline0
ब्रिटेनमा क्याम्ब्रिजका वैज्ञानिकले क्यान्सरको एक भर्चुअल रियालिटी (भीआर) थ्रीडी मोडल बनाएका छन् जसले यो रोगको परीक्षण र उपचारलाई थप उत्कृष्ट बनाउनेछ ।
तर यो नयाँ प्रविधीमा के विशेष छ ?
वास्तवमा यो प्रविधीमार्फत ट्युमरको नमुनालाई सुक्ष्म ढङ्गले अनुसन्धान गर्न सकिनेछ । यसमार्फत क्यान्सरको कोसिकालाई हरेक तरिकाले परीक्षण गर्न सकिने र त्यसको म्यापिङ गर्न सकिने भएकाले यो प्रविधि यसकारण पनि फाइदाजनक साबित हुनेछ ।
अनुसन्धानकर्ताका अनुसार यसको मद्दतले क्यान्सरको जटिलतालाई थप उत्कृष्ट तरिकाले बुझ्न सहयोग हुनेछ । क्यान्सरको जटिलता बुझेपछि यससँग जोडिएका उपचार पनि खोजी गर्न सकिनेछ ।
यो प्रोजेक्ट एक अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानको हिस्सा हो ।
यसलाई कसरी तयार गरियो ?
– अनुसन्धानकर्ताले यो प्रविधि विकासका लागि स्तन क्यान्सरको एक मिलिमिटर टुक्रा लिए । यसमा लगभग एक लाख कोसिका थिए ।
– यसलाई पातलो पत्रमा काटियो र स्क्यान गरियो । त्यसपछि डीएनए परीक्षणका लागि त्यसमा निशाना बनाइए ।
– भर्चुअल रियालिटीको प्रयोगबाट ट्युमरलाई पुनः बनाइयो ।
– थ्रीडी ट्युमरको विश्लेषण भर्चुअल रियालिटी प्रयोगशालामा हुनसक्छ ।
– भीआर सिस्टममार्फत ट्युमरलाई जहाँ पनि पठाउन सकिन्छ ।
क्यान्सर रिसर्च युके क्याम्ब्रिज इन्स्टिच्युट (सिआरयुके) का निर्देशक प्राध्यापक ग्रेग हेननले बीबीसीलाई भने, ‘यसअघि कसैले पनि यति सुक्ष्म तरिकाले ट्युमरको परीक्षण गरेका छैनन् । कुनै पनि क्यान्सरको उपचारमा यो एक बिल्कुलै नयाँ र आधुनिक तरिका हो ।’
‘भर्चुअल ट्युमर’ प्रोजेक्ट सिआरयुकेको ग्रान्ड च्यालेन्जको हिस्सा हो ।
सिआर यूकेकी प्रमुख वैज्ञानिक प्राध्यापक केरन वुस्डन लण्डनमा फ्रान्सेली क्रिक इन्स्टिच्युटमा प्रयोगशाला चलाउँछिन् । यहाँ कुनै विशेष जीनले क्यान्सरबाट बचाउनमा कसरी मद्दत गर्छ भन्ने कुरा परीक्षण गरिन्छ ।
उनले बीबीसीलाई भनिन्, ‘यदि हामी नयाँ तरिकाको खोजी गरिरहेका छौं भने क्यान्सर कोसिकाले एक–अर्कासँग कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ ।’
उनी थप्छिन्, ‘टुडी भर्सन हामी पनि प्रयोग गर्छौं । त्यसको तुलनामा थ्रीडी सिस्टम निकै उत्कृष्ट छ ।’
नर्भिकलाई युरोपमा पुनः अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर पुरस्कार
सावधान : वनको च्याउमा विष हुन सक्छ ! कस्तो च्याउ खाने ?
मधुमेहका कारण पुरुषलाई ११ र महिलालाई १३ प्रकारका क्यान्सरको खतराः अध्ययन
स्वास्थ्य बिमा लिन चाहनुहुन्छ ? तपाईं भएकै ठाउँमा आउँछन् अभिकर्ता
२२ महिने बालकको चुडिएका २ वटा औला मेडिसिटीमा यसरी जोडियो
प्रोफेसनल एजुकेसनले अष्ट्रेलियन शैक्षिक मेला गर्दै
राहतका कामलाई बनाउन एनआरएनको आग्रह